ESI TINYE WINDOWS 7 NA VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
Ebe ọ bụ na anyị niile nwere mmasị ịnwale, gbanye n'ime usoro ntọala, na-eme ihe nke aka anyị, ịkwesiri iche banyere ebe dị nchebe iji nweta nnwale. Ebe dị otú a ga-abụ maka anyị VirtualBox mebere igwe na Windows 7 arụnyere.
Mgbe ị na-amalite VirtualBox mebere igwe (VB), onye ọrụ ahụ na-ahụ windo na interface zuru ezu n'asụsụ Russian.
Cheta na mgbe ị wụnye ngwa ahụ, a na-etinye ụzọ mkpirisi na desktọọpụ. Ọ bụrụ na ị na-ekepụta igwe arụmọrụ maka oge mbụ, n'isiokwu a, ị ga-ahụ ntụziaka zuru ezu nke nwere ike ịba uru n'oge a.
Ya mere, na window ohuru, pịa "Mepụta"emesị ị nwere ike ịhọrọ aha OS na àgwà ndị ọzọ. Ị nwere ike ịhọrọ site na os niile dị.
Gaa na nzọụkwụ na-esote site na ịpị "Na-esote". Ugbu a ịkwesịrị ịkọpụta ole RAM ga-ekenye maka VM. Maka ọrụ nkịtị ya, 512 MB ezuola, ma ị nwere ike ịhọrọ ndị ọzọ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị mepụtara diski ike. Ọ bụrụ na ịmeelarị diski, ị nwere ike iji ha. Otú ọ dị, n'isiokwu a anyị ga-elekwasị anya n'otú e si kee ha.
Chee ihe a "Mepụta disk diski ọhụrụ" ma gaa na nke ọzọ.
Ọzọ, anyị ezipụta ụdị diski. O nwere ike ịbụ ma ọ gbasaa ma ọ bụ nke nwere nha.
Na windo ohuru gi kwesiri igosi ebe ohuru onyinyo ugbua kwesiri idetu na ot'odi. Ọ bụrụ na ị mepụta disk buut nke nwere Windows 7, mgbe ahụ 25 GB zuru ezu (a na-edozi nọmba a na ndabara).
Maka ntinye ego, ngwọta kachasị mma ga-abụ itinye disk na mpụga usoro. Ọbịghi ime nke a nwere ike ime ka ịkwanye disk disk.
Ọ bụrụ na ihe niile ruru gị aka, pịa "Mepụta".
Mgbe e kere disk ahụ, a ga-egosipụta sistemụ nke VM ahụ e mepụtara na windo ọhụrụ.
Ugbu a ịkwesịrị ịhazigharịa igwefoto ngwaike.
Na mpaghara "General," nkeji taabụ egosiputa ihe dị mkpa gbasara igwe kere.
Mepee tab "Di elu". N'ebe a, anyị ga-ahụ nhọrọ ahụ "Nchekwa maka foto". A na-atụle nchekwa ahụ a kapịrị ọnụ ka a debe ya na mpụga usoro, ebe ọ bụ na ihe oyiyi ahụ dị oke.
"Mwekọrịta nkekọrịta" gosipụtara ọrụ nke ederede na mmekọrịta nke os na VM gị. Onye na-echekwa ya nwere ike ịrụ ọrụ na 4 ụdịdị. Na nke mbụ, a na-eme mgbanwe naanị site na sistemụ arụmọrụ ndị isi na isi, na nke abụọ - na ntụgharị usoro; nhọrọ nke atọ nyere ohere abụọ ahụ, nke anọ na-egbochi mgbanwe nke data. Anyị na-ahọrọ nhọrọ bidirectional dị ka ihe kacha mma.
Na-esote, mee ka nhọrọ nke icheta mgbanwe na usoro nke ọrụ mgbasa ozi nke mbughari. Nke a bụ ọrụ dị mkpa, n'ihi na ọ ga-ekwe ka usoro ahụ buru ibu ọkwa CD na DVD.
"Obere ngwaọrụ" Ọ bụ obere panel nke na-enye ohere ijikwa VM. Anyị na-akwado ịmegharị njikwa a na ọnọdụ ihuenyo zuru oke, ebe ọ bụ na ọ na-agbanyegharịa menu isi nke window window VM. Ebe kachasị mma ka ọ bụrụ akụkụ nke elu nke windo ahụ, ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe ize ndụ nke ịpị otu bọtịnụ ya na mberede.
Gaa na ngalaba "Usoro". Akpa taabụ na-enye gị ụfọdụ ntọala, nke anyị ga-atụle n'okpuru.
1. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịkwesịrị idozi ego nke VAM RAM. N'otu oge ahụ, ọ bụ nanị mgbe e mechara ya, ọ ga-aghọ nke doro anya ma ọ bụrụ na a họpụtara olu ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Mgbe ị na-ahọrọ, ị kwesịrị ịmalite site na ọnụ ọgụgụ anụ ahụ arụnyere na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ọ bụ 4 GB, mgbe ahụ n'ihi na VM ọ na-atụ aro ka ịnye 1 GB - ọ ga-arụ ọrụ na-enweghị "emechi ụkwụ".
2. Kpebisie ike ka ị na-ebugharị. Enweghi disk disk (diskette), gbanyụọ ya. 1st n'ime ndepụta a ga-ekenye CD / DVD-ụgbọala iji nwee ike ịwụnye OS si disk. Rịba ama na nke a nwere ike ịbụ ma ọ bụ diski anụ ahụ ma ọ bụ ihe oyiyi ọkara.
E nyere ntọala ndị ọzọ na mpaghara ozi. Ha nwere njikọ chiri anya na nhazi ngwaike nke kọmputa gị. Ọ bụrụ na ịwụnye ntọala ndị na-adịghị adabere na ya, nkwụsị nke VM agaghị ewere ọnọdụ.
Na taabụ "Nhazi" onye ọrụ ahụ na - egosi ọtụtụ cores e nwere na mamaboardboard. Nhọrọ a ga-adị ma ọ bụrụ na agbadoro ngwaike ngwaike. AMD-V ma ọ bụ VT-x.
Banyere ngwunye ngwunye ngwanrọ AMD-V ma ọ bụ VT-x, tupu ịrụ ọrụ ha, ọ dị mkpa iji chọpụta ma ọrụ ndị a ọ na-akwado site na processor na ma ọ bụ na mbụ ha gụnyere Bios - ọ na-emekarị na ha nwere nkwarụ.
Ugbu a tụlee akụkụ ahụ "Gosi". Na taabụ "Video" egosi oke ebe nchekwa nke vidiyo vidio a. Nakwa ebe a bụ mmalite nke ọganihu abụọ na ụzọ atọ. Nke mbụ n'ime ha bụ ihe a na-achọsi ike ka o nwee ike, ma nke abụọ bụ nhọrọ.
Na ngalaba "Ndị na-ebugharị" A na-egosipụta nkesa niile nke a na-emepụta windo. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ windo arụmọrụ na edemede ahụ "Eberibe". N'ime ya, anyị na-ekpuchi onyinyo nke windo nwụnye Windows 7.
Ejizi igwefoto dị njikere dị ka ndị a: pịa akara ngosi dị na nri. A na-emepe emepe ka anyị na-pịa "Họrọ oyiyi diski anya". Ọzọ, ị ga-agbakwunye ihe oyiyi nke buut disk nke sistemụ.
Ihe ndị metụtara netwọk, ebe a anyị agaghị ekpuchi. Rịba ama na nkwụnye netwọk ahụ bụ ọrụ mbụ, nke bụ ihe dị mkpa maka inweta VM na Ịntanetị.
Na ngalaba A ọ na-eme ka uche ghara ịdị na-ezuru ya, n'ihi na ọ dịghị ihe jikọtara ọdụ ụgbọ mmiri taa.
Na ngalaba USB Lelee nhọrọ abụọ dịnụ.
Na-aga n'ihu "Nkọkọta Ekekọrịta" ma họrọ ndekọ aha ndị ahụ nke VM ga-enye ohere.
Otu esi emepụta ma hazie nchekwa nchekwa
Usoro nhazi dum zuru ezu. Ugbu a, i nwere ike ịga n'ihu na nwụnye os.
Họrọ igwe akụrụngwa na listi wee pịa "Gbaa ọsọ". Ntinye nke Windows 7 na VirtualBox n'onwe ya yiri nke a na-etinye Windows nwụnye.
Mgbe nbudata faịlụ ndị echichi, windo ga-emeghe site na ịhọrọ asụsụ.
Ọzọ, pịa "Wụnye".
Nabata usoro okwu ikikere.
Wee họrọ "Tinye zuru ezu".
Na windo na-esote ịkwesịrị ịhọrọ mpaghara disk iji wụnye sistemụ arụmọrụ. Anyị nwere otu akụkụ, ya mere anyị na-ahọrọ ya.
Ihe ndị a bụ usoro ịwụnye Windows 7.
Mgbe echichi, igwe ga-agbanyeghachi ugboro ugboro. Mgbe niile reboots, tinye aha njirimara chọrọ na aha kọmputa.
Ọzọ, usoro mmemme na-akpali gị ịmepụta paswọọdụ maka akaụntụ gị.
N'ebe a anyị na-abanye igodo ngwaahịa, ma ọ bụrụ na ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, dị pịa "Na-esote".
Ihe na-esote bụ Ebe Mmelite Elu. Maka igwe akụrụngwa, ọ ka mma ịhọrọ ihe atọ.
Anyị setịpụrụ oge na ụbọchị.
Mgbe ahụ anyị na-ahọrọ nke netwọk anyị ọhụrụ igwefoto igwe bụ nke. Push "Home".
Mgbe omume ndị a gasịrị, igwe na-emepụta ihe na-akpaghị aka na anyị ga-esi na desktọọpụ nke Windows 7 ọhụrụ.
Ya mere, anyị arụnyere Windows 7 na windo VirtualBox. Mgbe ahụ ọ ga-arụ ọrụ, ma nke a bụ isiokwu maka isiokwu ọzọ ...